Saturday May 14, 2022 - 18:05:39 in News by A. Asbaro
Hargeisa(HWN):-Maxamuud Daahir Jaamac oo kamid ah xubnaha Guddida Doorashooyinka Somaliland,
Hargeisa(HWN):-Maxamuud Daahir Jaamac oo kamid ah xubnaha Guddida Doorashooyinka Somaliland, ayaa iscasilay kadib khilaaf soo kala dhexgalay xubnaha guddida.
"Waxan halka ka caddaynayaa madaama oo ay timid is qab qabsi iyo xaalado ka dhex abuurmay koomiishankii, waxan caddaynayaa, aniga ayay i joogtaa in aan qaran kayga u tudho, oo aanan xilka ilaashan, waxan halkan ka sheegayaa in aan qarankayga u tudhay oo aan leeyahay maanta laga bilaabo waan iska casilay "ayuu yidhi Maxamuud.
Xubintan is casishay ayaa kamid ahayd xubnaha Golaha Guurtida Somaliland ugu jiray guddida doorashooyinka, waxaana is casilaadiisu khasbaysa in golaha guurtidu ay dib usoo buuxiyaan jagada uu baneeyay.
Xiligan oo ay ahayd in ay bilaabanto diwaangalinta doorashooyinka soo socda ee Somaliland, ayuu khilaaf joojiyay shaqadii guddida doorashooyinka soo if baxay, kadib markii xubnaha koomiishanku ay doorteen guddoomiye cusub, isla markaana uu guddoomiyihii hore ee guddidu ku gacan saydhay is badalka.
Mucaaradka Somaliland ayaa khilaafka u dhexeeya guddida doorashooyinka ku sifeeyay in ay tahay dabin uu madaxweyne Biixi ku doonayo in uu doorashada dib ugu dhigo, oo uu isagu guddida khilaafka galiyay.